असत्य माथि सत्यको विजय | दिशानिर्देश कञ्चन साप्ताहिक
असत्य माथि सत्यको विजय
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचन्द्रको कार्यकालमा राक्षस प्रवृत्तिले मानव जाति देवतालाई सताएको र दुःख दिएका थिए । त्यसको उद्धार कार्य श्रीरामले गर्नुभयो तर श्रीराम पनि आफ्नी ममतामयी सौतेली आमा कैकेहीबाट शोषित भएकै कारण राजपाट छोडी निरीह पिताको आज्ञा पालन गर्न बनबास तर्फ गएका हुन् । अर्थ जेसुकै लगाएपनि रामचन्द्र भगवान प्रति जनताको धारणा उनको बहाली अवस्थाको भन्दा आज कम छैन । जति राम जीवित छदा र उनको शासन छदा मानि आएका थिए त्यो भन्दा पनि झन बढी माया ममता प्रेमका साथ युग परिवर्तन पछि पनि मानि रहेका छन् ।
के नेपाल सत्यको खोजीमा छ ?
के नेपाली जनताका भावनाको कदर नेताले गरेको छ ?
आज रावणले अयोध्या विजय गरेको दिन हो या श्रीरामले लंका ?
रावण कुलका विभिषणहरुका खेलहरुको पहिचान कसरी गर्ने ?
आज उहाँको संसारमा सत्यको विजय भएको छ, कसलाई थाहा छ ? सत्य के हो ? जनताले कसरी बुझ्ने ? तत्काल आज म्यानमार (बर्मा) बाट ४ लाख २२ हजार मुसलमानहरु शरणार्थीको भेषमा बंगलादेश पुगेका छन् भने कयौं गाउँहरुमा हिन्दुहरु माथिको नरसंहार भएको छ । सामुहिक चिहानबाट लासहरु खोजी रहेका छन् । गाउँ गाउँमा रुवाबासी चलेको छ । यो प्रत्यक्ष समाचार भारतीय निजि टी.भी. च्यानलले समय समयमा प्रकासमा ल्याई रहेको छ ।
हिन्दुहरुलाई मार्नु सत्य हो वा मुस्लिमहरुलाई म्यानमारबाट निकाला गर्नु ? वा प्रजातन्त्रवादी नेतृ वर्तमान कि प्रधानमन्त्रीको दोषले हो कसरी कुन कुरा सत्य हो ? त्यस्तै नेपालमा १० वर्ष द्वन्द चल्यो । कुन पक्ष रावण समुहको थियो कुन राम पक्षको, के द्वन्द द्वारा आतंक फैलाउनु राम्रो थियो वा राजा वीरेन्द्रको वंशनास हुने गरी प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसादको कार्यकालमा हत्या भयो, त्यो हत्यामा सत्य र असत्य के थियो । राजा मारिनु असत्य थियो भने त्यसपछिका दिनहरुमा पनि पुरै राजसंस्था माथि नै हरतरहका हमला भए ।
अन्तमा राजसंस्थालाई नै सभासदहरुले हात खडा गरी निलम्बन गरे । के थियो त्यो के सत्य माथि असत्यको विजय थियो ? आज राष्ट्र र राष्ट्रको सम्पत्तिलाई राजनीतिक पार्टीको नाममा भागबण्डा गरिएको छ । के यो नै सत सत्य हो ? जनता द्वारा जनमत लिई नेता छान्न हुने तर जनमत द्वारा व्यवस्था छान्न नपाउनु नै सत्य हो । त्यसकारण सत्य भनेको बलजफ्ती जे ग¥यो त्यही हो । द्वन्दको सिर्जना गरी २५ हजार भन्दा बढी नेपालीको मृत्यु विचल्ली भयो । के मर्ने र विचल्लीमा पर्नेहरु असत्य हुन् । आफ्ना जीवनमा एकपटक जन्मिएको बालकको अपहरणपछि हत्या गरियो । इन्साफ माग्न आमा बाबु अनसन बस्दा बाबुको मृत्यु भयो लास अझै सरकार संग छ । आमा मृत्यु शैय्यामा पुगेकी छन् । के उनी मारिएका बाबु छोरा रावण कुलका तथा मार्ने राम वंशका थिए ? त्यस्तै त्यस्तै हेर्दा आजकालको विजया दशमी हो वा हरुवा दशमी कहाँ कसलाई सोध्न सकिएला ।
विजया दशमी २०७४ पनि २०७३ सालको दशैं जस्तै भएर वित्यो । नेपाली जनताको घरघरमा पुग्यो । यो विजया दशमीले कहिले कसलाई किन विजय गरेको थियो । आजको परिवेशमा कसले कसलाई विजय ग¥यो वा गरेनन् । के आजको युग र उहिलेको युग जुन युगले विजया दशमीको दिन मानव शत्रु माथि विजय गरेको थियो । के सत्यको विजय थियो होला ? के हो सत्य ? के हो असत्य ? कसरी कसले पहिचान गराई देला ?
एउटा कुरा सत्य छ त्यो हो यस्ता नेपाली अर्थात् हरेक चाडपर्वमा अधिराज्य भरीका आफन्तहरु संग विभिन्न ठाउँमा भेटघाट एकमुष्ट हुन्छ । जस्तो पहाड तर्फका देवपीठहरु जस्तै सु.प.मा त्रिपुरा सुन्दरी, उग्रतारा, डिलाशैनी भगवती मन्दिरहरुमा लाग्ने मेलामा बालबच्चा बृद्धा समेतको
धेरै गाउँहरुको उपस्थिति हुने हुदा जसलाई मानव समाजको माया छ धेरै धेरै मित्रहरु संग भेट गर्न चाहन्छन् उनीहरुको लागि मिलनको राम्रो अवसर पनि हो तर असत्य माथि सत्यको विजयको बारेमा भन्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएको छ । वर्तमान युगमा वितेका युगझै अलग अलग पहिचान झल्कने अवस्था नभई सबै मनुष्य जस्ता मात्र देखिन्छन् । कुन देवता हो कुन राक्षस कुन मनुष्य सबै एकै अनुहारका हुदा चिन्न नसकिएकै कारण वर्तमान मानव समाजले राक्षसहरुबाट धोका पाएको हामी पाउँछौं । यसतर्फ अनिवार्य वेदाचार्यहरुको अध्ययन हुनु जरुरी छ ।
हिन्दुहरु हरेक ठाउँमा यही पर्वको प्रतिक्षामा रही राम लिलाको आयोजना गर्दथे । नेपालका मात्र नभई भारतको नयाँ दिल्लीमा त रामलिला मैदान नै भनेर नामाकरण गरेको छ । त्यस्तै अयोध्या, लखनौ, गडवाल, कुमाउ सु.प.को पहाडी जिल्लामा राम लिलाको लागि प्रख्यात बैतडीको नकतडी, पिपलकोटलाई मान्न सकिन्छ भने महेन्द्रनगर धनगढीमा पनि बसाई सरी आएकाहरुबाट बढी प्रेरणा पाई हरेक स्थानमा समयानुकुल रामलिला बनाउने गरेका छन् । मर्यादा पुरुषोत्तम राम प्रति जनताको अथाह प्रेमलाई टुटाउन विभिन्न अन्तराष्ट्रिय संघसंस्थाहरु लागि परेकाछन् ।
हुन सक्छ १०÷२० वर्षमा विजयादशमीको अर्थलाई अनर्थ सावित गर्नेछन् कुचेष्टा नगर्लान भन्न सकिदैन । विदेशी पाश्चात्य धून गानाहरु तर्फ युवाहरुको जति रुची छ आफ्नो लिकताबाट टाढिदै गएका छन् । मौलिकता मेटाउने षड्यन्त्रमा प्रगतिको नाममा नेता सरकार स्वयं लागि परेको छ । प्रमाणको लागि भन्दा विश्वका हरेक देशले आफ्नो देशको प्रगतिको लागि निकासी उत्पादन खालका उद्योगहरु सञ्चालन गरी अगाडी बढ्नेछन् भने हाम्रो सरकारले युवायुवती, नागरिकहरु लाई वैदेशिक रोजगारीको नाममा विदेश पठाई शक्तिवान योग्य श्रमजीवि नागरिकहरुको एकातर्फ अभाव गराएको छ भने अर्काे तर्फ पाश्चात्य सभ्यता आयात गरी आफ्नो मौलिकता हराउन लगाउने खेलमा लागेका छन् । यो कदापी ठीक होइन । भविष्यमा नेपालको चित्र नै परिवर्तन हुनेछ ।
धार्मिक चित्रपरिवर्तनमा हाम्रो नेताहरु आफैमा रावण शैलीले सफल भएको महसुस गर्दैछन् जुन सुखद नभई दुःखद हुनेछ । त्यसकारणले पनि हामीले हरेक काम कुराको एकिन गर्न सक्नु परेको छ । कुन रावणशैली हो कुन राम शैली नयाँ नेपाल भनेर नेताहरु आफु पनि कराई रहेका छन् अरुलाई पनि कराउन लगाउँदै छन् । नेपाललाई रावणबाट खोसेर रामको जिम्मा लगाउँदै छन् अथवा रामबाट खोसेर रावणको जिम्मा यो बुझ्नु अत्यन्त आवश्यक छ । साराका
सारा जनतालाई आशाको भुमरीमा फसाई सकिएका छन् सकेका छन् ।
जनता आफैमा केही गर्न सक्दैनन् । जनतामा अनेकता हुन्छ र तसर्थ एकतामा बाध्ने डोरीको आवश्यकता अझै रहेको पाइन्छ । २०५८÷२०५९ देखि नेपालमा जुन हर्कत भए ती हर्कतहरु श्रीरामको शैलीमा गरिए वा रावणको शैलीमा त्यसबाट सम्पूर्ण नेपाली समाज कस्तो रहेको छ शान्ति तर्फ पुग्दैछ वा दंगा फसाद वैमनश्यताको श्रृङ्खलाको खोज गर्दैछ । हामी रामराज्यको कल्पनामा छौं कि रावण राज्यको कल्पना गरी रहेका छौं जनताको नेतृत्व गर्नेहरुले सप्रमाण प्रष्ट पार्नु जरुरी छ ।
← हलिया मुक्ति
पर्वहरुमा विभिन्न गोचर →